Kutheni uValeria Copponi? -Ukubalwa ukuya eBukumkanini
Kutheni uValeria Copponi?
Ibali likaValeria likaCopponi lokufumana indawo evela ezulwini laqala xa wayeseLourdes ehamba nendoda yakhe yasemkhosini kuhambo. Apho weva ilizwi awalichaza njengengelosi yakhe, emxelela ukuba aphakame. Emveni koko wammisa kwiNkosazana Yethu, eyathi, "Uya kuba sisithsaba sam" -igama awaliqondayo kwiminyaka kamva xa umfundisi wayisebenzisa kwimeko yeqela lomthandazo awaliqala kwisixeko sasekhaya eRoma, e-Itali. Ezi ntlanganiso, apho uValeria emthumelela imiyalezo, zaqala ukubanjwa kabini ngenyanga ngolwezithathu, emva koko ngeveki ngesicelo sikaYesu, esithi yena bonayo kwicawa yaseSant'Ignazio ngokunxulumene nentlanganiso ne-American Jesusit, uF. URobert Faricy. Ukubizwa kukaValeria kuqinisekiswe ngokunyanga okungafaniyo kwendalo, kubandakanya enye evela kwisifo samachiza amaninzi, ebandakanya namanzi angummangaliso e-Collelenza, 'I-Lourdes yase-Itali' kunye nekhaya le-Spanish nun, Speranza di Gesù (1893-1983), okwangoku ukubetha.
Imiyalezo evela kuValeria Copponi
UValeria - Wena oziva Unamandla. . .
. . . nibugcinela uSathana ubomi benu.
ntlekele, Uqeqesho, uguqulo, uMariya oNgcwele, uMariya, UMariya ukhulula amaqhina, Namandla, thandaza, nekratshi, uSathana, ababi, ubungendawo
UValeria - Abantwana Bam Ababekade Bekholelwa . . .
Ngamana 28, 2022
. . . bandinikele umva
ngabapostile, amaxesha amabi, wabethelelwa emnqamlezweni, amaxesha okuphela, UYesu wenceba, Inceba, mthandazo, Ukuza okwesibini
UValeria-Cela ukuBuya koNyana wam
Ngamana 14, 2022
Thandaza, khawuleza, urhoxe ukuba wedwa . . .
ngokukhawuleza, Umama, Inenekazi lethu, thandaza, i propaganda, Ukuza okwesibini, cwaka, yedwa
UValeria-Phila ngokungathi lusuku lwakho lokugqibela
Ngamana 1, 2022
Thandaza, wenze abantu bathandaze.
Sinikele yonke imibingelelo yakho.
ubuKatolika, icawa, ukuvuma, uMariya, Bunzima, Umama, mthandazo, ngelelo, zilingo
UValeria - Uxolo luya kuba ngunaphakade
Aprili 7, 2022
Valeria-Coca imizimba yakho
Ngamana ubunyulu bam bube ngumzekelo kuni.
nyulu, engaqhelekanga, ku coceka
UValeria-Andisakwazi Ukubamba Isandla sikaTata
Guqukani, bantwana bam zintanda.
UValeri Copponi-Ixesha lokuphendula
Matshi 17, 2022
Hamba kwiindlela zabangcwele.
ukholo, Uxolo, mthandazo, themba, Imfazwe
Valeria - Ukudlala Ngomlilo
Matshi 10, 2022
Abantwana abaphazamisekileyo nabangevayo...
ukuguqulwa, ukungathobeli, ukuphazamiseka, thintelo, ubuvila, uMariya, Umama, mthandazo, guquka, Isidenge, Imfazwe
Valeria-Amaxesha ayeza kugqitywa
Matshi 3, 2022
Uya ulahleka ngakumbi kwiindlela zasemhlabeni.
kugqitywa, amaxesha okuphela, ukholo, uthando, thobela, ixesha, Imfazwe
UValeria - Ukukhanya kuya kunyamalala
Februwari 23, 2022
Imihla yakho iya isiba mfutshane ... thandaza phambi komnquba.
unqulo, Bumnyama, utata, thintelo, uMariya, Umama, mthandazo
I-Valeria - Ukutya okukodwa
Februwari 19, 2022
...oko kunokwanelisa ukulamba kwakho.
Isonka soBomi, ubomi banaphakade, Umthendeleko, izulu, UYesu, imana, uMariya, Umama
Februwari 5, 2022
UYesu akazange awachithe amazwi...
UYesu, uthando, ulwimi, magama
UValeria-Umhlaba wakho ube ngumhlaba kaSathana
Kungekudala yonke into iza kufezekiswa...
ukholo, magisterium, Imbuyekezo, nde zeleka, inyaniso
Andikwazi ukuphulukana nawe. Kufuneka undincede.
ukuguqulwa, guquka, mfutshane, ixesha
UValeria-Yintoni enye endingakwenzela yona?
Disemba 31, 2021
Vuka, alisekho ixesha lokulala!
iphakade, izulu, isihogo, umvuzo, zilingo, Imbandezelo
UValeria-Musa ukoyika ukugxeka
UYesu usebenzisa zonke iindlela ukufikelela kowokugqibela kubantwana Bakhe.
eyo, ufefe, ezimbi, ukungakhathali, inyoka
UValeria - Uphila kumaxesha okugqibela
Disemba 16, 2021
Andikwazi kulinda ukunamkela ngexesha elinye.
amaxesha okuphela, Isahluko soxolo, ukhuselo, yokufihla, isilumkiso
Valeria - Ngqina iVangeli eNgcwele
Disemba 11, 2021
LiLizwi likaThixo eliyinyaniso.
IBhayibhile, Kwincwadi, icawa, iivangeli, john, xhuma, uphawu, matthew, Isibhalo, ilizwi likathixo
Valeria - Kula maxesha okugqibela
...ndizosondela ngakumbi kuwe.
ukuzila ukudla, mthandazo, ehlangulayo, ngelelo, nde zeleka
UValeria-Yibani ngabantwana bam bokugqibela boXolo
Bonke abakufutshane nawe bamele bave amandla akho avela kuThixo.
mhlabeni, Isahluko soxolo, UMoya oyiNgcwele, Uxolo, ngco liseko, mthandazo, amandla
UValeria - Ixesha liyakhawuleza
Kungekudala, uya kukhululwa kumakhamandela kaSathana.
Isonka soBomi, Isahluko soxolo, Umthendeleko, UYesu, Bunzima, Igazi Elixabisekileyo, buya, Ukuphumelela
UValeria-Yibani ngabapostile bam boXolo
Baxolele abo bakuphatha kakubi ... thandaza kwaye uzile ukutya.
ukuvuma, Umthendeleko, ukuzila ukudla, uthando, Uxolo, mthandazo, Imbuyekezo, ngelelo
Ungaze uluthandabuze uthando olukubophelelayo kum.
isonka semihla ngemihla, Umthendeleko, ukholo, Ukoyika, Intliziyo Enganyanzelekanga, UYesu, uMariya, Umama, themba
UValeria-Thatha inyathelo eliqinisekileyo eliya kuThixo
Kuphela kukuthobela, onokuthi usindise ubomi.
inkululeko, tho bekile, thobeka, uthando, ukuthobela, ukunyamezela, mthandazo, ngelelo, uloyiso
UValeria - Kutheni uloyiko luthatha intliziyo yakho?
UMtyholi uyazi ukuba la maxesha okugqibela.
Mtyholi, Isahluko soxolo, Umthendeleko, inkululeko, lungisa, kwihlabathi elitsha, Ukuphumelela, themba
UValeria-Ngaba uyakholelwa kwiimbonakalo zam?
Bambalwa ke kuni abandiphulaphuleyo.
imbonakalo, ukuvuma, ukungakholelwa, tha ndabuza, Umthendeleko, nya mezela, intsalela, umhlambi omncinci, silingo, ixesha
UValeria - Ekuthobeleni iMithetho kaThixo
... kunye ne-hubris yomntu.
thobeka, nekratshi, inzululwazi, inzululwazi
IValeria-kungekudala la maXesha aya kuphela
Musa ukuyichitha inkululeko yakho.
ngonaphakade, iphakade, ukuthembeka, inkululeko, izulu, isihogo, ubomi, mthandazo, ubungqina
IValeria - Andikaze ndiphalaze iinyembezi ezininzi
... kodwa amaxesha akho aya kubona ukuphela kobubi.
icons, Intliziyo Enganyanzelekanga, iinyembezi, ndilila
IValeria -Yenza indlela yovuyo
Akusayi kuphinda kubekho ububi.
ubuKatolika, icawa, Isahluko soxolo, ukholo, uMariya, mthandazo, Ukuphumelela
IValeria - Ndikuxelela kwakhona ukuba Ucoceke
Umzimba wakho ufuna ukuhlala ucocekile. . .
ubuKatolika, ukholo, uMariya, Umama, zokuhlanjululwa
IValeria-la maXesha ethu okuGqibela
Idabi lokugqibela leli xesha nxamnye noSathana.
ulwalathiso lukaThixo, Intliziyo Enganyanzelekanga, umthetho, uMariya, Intshabalalo, yokufihla, silingo, Ukuphumelela, uloyiso
IValeria - UMthendeleko, uKhuseleko lwakho
Ungaze uhambe kwiCawa likaKristu.
IKalvari, ubuKatolika, icawa, mnqamlezo, Umthendeleko, ukuthembeka, isiseko, UYesu, Bunzima, ngelelo, usindiso
IValeria - Ifowuni yoomama
Thandaza kwaye ubingelele imiphefumlo.
ukuzila ukudla, thintelo, ukuba ngumama, omama, mthandazo, ububingeleli, ababingeleli, ngelelo, buhlungu, lusizi
UValeria-ekubekeni indawo yokuqala ngokomoya
... endaweni yokuxakeka zizinto zasemhlabeni.
ukuvuma, umkhosi, izinto zasemhlabeni, izulu, UYesu, amandla, iisakramente, uSathana, ngokomoya, ngokomoya, ihlabathi
IValeria -Ihloniphe iCawe Yam
Into eyinyani ayinakho ukubhidaniswa nento ebubuxoki nje.
ubupostile, ubuKatolika, icawa, ukholo, ngcwele, Nye, roman, inyaniso, ubunye
IValeria - Shiya isono ngasemva
Julayi 16, 2021
... okanye awusoze ulwazi uthando lokwenene.
IValeria - Ihlabathi lifanele ukohlwaywa
... kodwa siyazitshabalalisa!
isohlwayo, nyulu, UYesu, sohlwayo, zokuhlanjululwa, ku coceka, Imbandezelo, uloyiso, ihlabathi, ulutsha
IValeria - Ingqungquthela yokuZikhukhumeza
Julayi 5, 2021
Inguquko yinto eseleyo.
ikratshi, babel, ulwazi, inzululwazi, inzululwazi, ngqungquthela
IValeria- Andinakubashiya abantwana baM
La maxesha awanakuqhubeka ...
ubuKatolika, kudideka, ukuguqulwa, ukholo, uMariya, Umama
IValeria - Ukuthandaza Esilingweni
Awuyi kuvavanywa ngaphaya kwamandla akho.
Umthendeleko, UYesu, utata wethu, thandaza, mthandazo, uSathana, amandla, silingo
IValeria - Ubungcwele buthetha usindiso!
Ingcebiso esebenzayo evela kuMama wethu.
ubomi banaphakade, iphakade, ngokukhawuleza, ubungcwele, ukungakhathali, thandaza, usindiso
IValeria - Tshisa Ngothando ngoYesu
Ndibuhlungu, kodwa kungekudala ndiza koyisa.
isiseko, Intliziyo Enganyanzelekanga, UYesu, mthandazo, Ukuphumelela
IValeria - Yamkela omnye nomnye
Uyayiqonda le nto uncitshiselwe ukuba ube yiyo?
kwamkela, Umthendeleko, Ukoyika, injabulo, ukwanga, UYesu, injabulo, uthando, Uxolo
IValeria - Owona Mthandazo Uthandekayo
Umbingelelo weMisa eNgcwele.
igazi, umzimba, mihla le, Umthendeleko, ilitha, Bunzima, mthandazo, umthendeleko, ngelelo
Nikela ubomi bakho ngenxa kaYesu.
xolelo, uthando, Inceba
IValeria-Yibani Njengabantwana Kwakhona
Ngamana 6, 2021
Ndizokubuyisela uvuyo oluphulukene nalo ...
ukulahlwa, njengomntwana, abantwana, ukholo, UYesu, umbuso, Kunika, themba
Valeria - Unam
ukungcwaliswa, Ukoyika, ukungazithembi, uMariya, iyeza, Umama, mthandazo, themba
IValeria - Sukulahlekelwa luncumo lwakho
Lowo ukholwayo kuThixo makangalahli ithemba.
Isahluko soxolo, UYesu, uMariya, Ukuphumelela
IValeria-Ngokwenyani liXesha elincinci eLisekho
Nguwe kuphela onqabisekileyo.
Imfazwe, icawa, Mtyholi, Umthendeleko, isihogo, UYesu, uMariya, Umama, uwuthanda, ukhuselo, yokufihla, uSathana
IValeria - Ukubandezeleka kwam akukapheli
Awuziqondi iingozi ...
I-Covid-19, mnqamlezo, isihogo, bhubhane, Imbuyekezo, usindiso, nde zeleka
IValeria - Ngenisa iBandla lam lamaKatolika
Lunye kuphela ukholo.
ubupostile, ubuKatolika, isitulo, icawa, ukholo, UYesu, peter, iliwa, roman, eRoma
UValeria - Ungaze Uthandabuze Ubukho Bam
Kusaya kuba mzuzwana, ububi buza kugqiba.
iingelosi, uMariya, Umama, Inenekazi lethu, abazali, Ukuza okwesibini
IValeria-Xelisa iNtsapho eNgcwele
Matshi 18, 2021
Sihlaselwe nangabantu abanamandla.
umzekelo, usapho, i-herod, alingise, UYesu, Yosefu, uMariya, imodeli, umNazarete, Ntshutshiso, mthandazo
IValeria - Yenza uMbuyiselo wezi Tyala
Matshi 11, 2021
Ukubuyisa, uya kuba noguquko phakathi kwabo ubathandayo.
ukuguqulwa, iziqalekiso, UYesu, uMariya, ukona, Imbuyekezo, guquka
IValeria - Ndincede
Matshi 4, 2021
Iingqondo zakho azisasizakali ekukhanyeni.
ukuvuma, uMariya, Umama, thobela, mthandazo, Imbuyekezo, iisakramente
IValeria-AmaXesha asondela ngokukhawuleza
Imiyalelo, Ntshutshiso, ngxamiseko
IValeria - Inyoka yakudala isebenzisa ubuxoki
Kwisihendo jika kwangoko emthandazweni
IValeria -Khulisa abantwana ukuba bamthande uYesu
Februwari 12, 2021
abantwana, usapho, oyise, UYesu, uMariya, omama, mthandazo, Abaselula
IValeria - Zithembiseni kum
Musa ukubathemba abezopolitiko okanye amanani amancinci.
khokelo, izulu, Intliziyo Enganyanzelekanga, uMariya, womama, Umama, ukhuselo, yokufihla
IValeria - Ndinguye Lowo!
Umama wakho uyakukukhokelela elusindisweni.
ukholo, ithemba, UYesu, inkosi, uMariya, Umama, ukumkanikazi, usindiso, umsindisi, intombi
UValeria-Ndifuna ukuba ube novuyo
Ncuma, ngenxa yosindiso lwakho.
Isahluko soxolo, ukholo, ithemba, UYesu, injabulo, uMariya, vuyela, Ncumo, Ukuphumelela, themba, uloyiso
IValeria-Ubusazi ukuba la Maxesha Ayeza
Zolile, thandaza, kwaye udumise uThixo.
Umchasi-Kristu, apocalypse, amaxesha okuphela, Isahluko soxolo, Ntshutshiso, mthandazo, ukwambula, irosari, Imbandezelo, Ukuphumelela, uloyiso
IValeria - Kungekudala…
... uya kufumana uvuyo olukhulu.
ubunzima, Isahluko soxolo, UYesu, Umama, ipentekosti, lawula, zilingo, Imbandezelo, Ukuphumelela, uloyiso
IValeria - Umthandazo kunye nokubandezeleka
Disemba 31, 2020
Into esehlabathini ayisayi kukwanela.
Isahluko soxolo, ukholo, injabulo, nomonde, mthandazo, nde zeleka, Imbandezelo, Ukuphumelela
IValeria - Ukuthemba iLizwi likaThixo
Disemba 24, 2020
Ngamana ukuzalwa kwam kube kukuzalwa kwakho kwakhona.
kuzalwa, Krisimesi, ukuguqulwa, Inimba, thobela, mthandazo, guquka, Ukuphumelela
IValeria - Ndibandezeleka kakhulu
Ubulungisa buza ngemigudu emikhulu.
mnqamlezo, wabethelelwa emnqamlezweni, xolelo, isihogo, UYesu, guquka, ngelelo
Disemba 11, 2020
... ngoku ulahlekelwe yinkululeko.
guqula, I-Covid-19, ngokukhawuleza, inkululeko, thandaza, guquka, ixesha, zilingo, Imbandezelo, ngxamisekileyo
IValeria - Uvavanywa ngokuqatha
Disemba 6, 2020
Nceda, UYesu, uMariya, igama, umkhuseli, yokufihla, intombi
IValeria - uYesu uza kubuya kungekudala
Kodwa okokuqala, izilingo ziya kuvela ngequbuliso ...
eza, Isahluko soxolo, UYesu, uMariya, yokufihla, buya, Ukuphumelela
IValeria - Ukuzinikezela Ngaphandle kokuthandabuza
Ubumnyama abuzitshintshi iindlela zikaThixo.
ukulahlwa, Musa ukoyika, Kunika, themba
I-Valeria-Ukubandezeleka kunceda ekuboniseni
Thatha isigqibo sokwenza okulungileyo kwaye uphumelele.
Ulwazi, Kukhetha, ukhetha, ukungathobeli, ukuthembeka, Inceba, reflection, nde zeleka, silingo
Oktobha 29, 2020
Akukho mntu uya kuba nakho ukuthi: "Bendingazi".
ukuvuma, UYesu, guquka, isono, isilumkiso
IValeria - Andikaze Ndisondele Kangaka
Intliziyo Enganyanzelekanga, uMariya, Umama, Uxolo, mthandazo, zilingo
UValeria-Umthandazo wahlula abantwana baM
Oktobha 15, 2020
Cengceleza "uMgaqo" ngentliziyo yakho.
ifredo, inkolo, ukholo, mthandazo, Ukuphumelela
IValeria - Jonga Phambili
Akukho mntu unokuthabatha ubomi obungunaphakade kuwe.
iphakade, ithemba, UYesu, Umama, Inenekazi lethu, mthandazo, ngelelo
UValeria - AndingoYe owohlwaya
mnqamlezo, imisebenzi emihle, thintelo, bubele, Inceba, nomonde
UValeria Copponi-Thatha uBomi ngokuBalulekileyo
Awusalawuleli ukufumana ixesha likaYesu.
UValeria Copponi-Ukuzixakekisa kwakho akuveli kuThixo
Musa ukuchitha elinye ixesha elininzi ngeendaba ezimbi.
UValeria Copponi - Ndizokuthuthuzela
Ndikunye nawe, ndiyakuthanda kwaye andizukulahla nokuba ngowona mntwana ungamthobeliyo.
UValeria Copponi - Buyela Ekhaya
Izilingo zakho ngalo mzuzu sisisilumkiso sokuba, kuni nonke, kukho into eza kutshintsha.
Copponi, Intshabalalo, irosari
UValeria Copponi-Inye kuphela nguMdali
Matshi 25, 2020
Ewe bantwana bam, “Maranatha.” Thandaza- thandaza-thandaza kwaye unyana wam akazukuzenza ukuba alinde ixesha elide.
UValeria Copponi-Ukholo lwakho luyakusindisa
Umhlaba kulo mzuzu udidekile ...
UValeria Copponi-UkuFa akufuneki kuXhomekeke kuloyiko
Ukufa akufuneki kulunge konke oku kutya, kuba uThixo wakho ukudalele ubomi obungenasiphelo.
UValeria Copponi-Beka izixhobo zakho
IYAFUMANEKA NGE-FEBRUWARI 19, 2020 UMariya, Umama woloyiso loXolo abe nawe! NdinguMama wakho, ovela ezulwini ...
UValeria Copponi - Kholelwa kumandla oMthandazo
Ithunyelwe ngoFebruwari 12, 2020, KuThixo wakho: Bantwana bam abathandekayo, ukuba ulapha, kungenxa yokuba ...
Umama wam uyakukhalela
Mininzi imiqondiso endikuthumela yona, kodwa ngezipho okanye ngeentlekele uninzi lwakho alufuni ukuluqonda.
UValeria Copponi -Sebenzisa rhoqo isixhobo sam
Ithunyelwe ngoJanuwari 29, 2020, isuka kuMary, yena Oza kuphumelela: Bantwana bam abathandekayo, ndinizisela iintsikelelo ...
UValeria Copponi-Nguye kuphela oya kukunika amandla
Ithunyelwe ngomhla wama-22 kuJanuwari ka-2020, kuYesu, nguBawo oyintombazana yam, bhala: ndinguye oza kubuya phakathi ...
UValeria Copponi-Ufuna ukunyanga amanxeba ethu
Ithunyelwe ngomhla kaJanuwari 15, 2020, kuYesu onenceba ndim, bantwana bam abathandekayo, ndinguYesu wenceba. Unako ...
UValeria Copponi - Iigusha Ngaphandle koMalusi
Ithunyelwe nge-8 kaJanuwari ka-2020, isuka kuMariya, Ithunyelwe nguNyana: Bantwana bam abathandekayo, namhlanje isigcini sam siguqulwe ...
UValeria Copponi - Unikelwe kwiNtliziyo kaThixo kaThixo
Ithunyelwe nge-2 kaJanuwari ka-2020, kuMama wakho waseZulwini: Bantwana bam abathandekayo, nika iintsapho zakho entliziyweni yaphezulu ...
← ICANDELO 1: UFr. UMichel Rodrigue:…
Kutheni uLuz de Maria de Bonilla? →